Moscow Ike Engineering Institute - Study na Russia
Moscow Ike Engineering Institute
Moscow Ike Engineering Institute Nkọwa
tọrọ ntọala : 1930
Echefukwala atụle Moscow Ike Engineering Institute
Idebanye aha na Moscow Ike Engineering Institute
MPEI azụ ndị Bachelors, Nna-ukwu na Ọkachamara (Engineers) na 15 ntụziaka na 73 specialties.National Research University “Moscow Ike Engineering Institute” bụ onye si kasị teknuzu mahadum nke Russia. Ọ na-enye ndị ọkachamara si ọzụzụ na nnyocha sayensị n'ọhịa nke energetic, windo mkpali nnyemiwu, radio ngwá electronic, kọmputa injinịa.
MPEI nwere oge a na izi ụlọ, agụmakwụkwọ na nkà mmụta sayensị laboratories, ụmụ akwụkwọ 'gọọmenti rụrụ, ndị dị ike ibuo ụlọ ọrụ, a pilot-osisi, ihe agụmakwụkwọ-nnyocha okpomọkụ na ike osisi, ihe mahadum oru park.
Total agụmakwụkwọ ebe bụ 262450 m2 Ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ bụ karịa 15000 mmadụ. Kwa Afọ ụmụ akwụkwọ 'acceptation bụ banyere 3000 mmadụ. Number nke Ph.D.-ụmụ akwụkwọ na Dr. Sci. -aga ime bụ 620 mmadụ. Number nke zuru-ọnụ ọgụgụ ndị nkụzi bụ 1560 mmadụ. si ha 17% nwere Dr. Sci. degrees na zuru prọfesọ utu aha, na 56% nwere Ph.D. degrees.
MPEI azụ ndị Bachelors, Nna-ukwu na Ọkachamara (Engineers) na 15 ntụziaka na 73 specialties.
18 Dissertation Councils eme MPEI. The Ph.D. na Dr. Sci. adian nwere ike gbachitere na sessions nke Council na 43 specialties.
MPEI a ikikere emekwa ka o nweta ndị na-esonụ degrees (iru eru) ka na-agụsị akwụkwọ na-esite na steeti Russian diplọma:
bachelọ nke sayensị (mmụta oge bụ 4 afọ)
gbaara Specialist (engineer, Economist, Manager wdg) (Education na Oge bụ 1,5 afọ mgbe Bachelor N'ezie)
Master nke Science (mmụta oge bụ 2 afọ mgbe Bachelor N'ezie)
Philosophy Doctor (na technical, anụ ahụ-mgbakọ na mwepụ, aku na uba na sayensị) (mmụta oge bụ 3 afọ)
Dọkịta nke Sciences (na technical, anụ ahụ-mgbakọ na mwepụ, aku na uba na sayensị) (mmụta oge bụ 3 afọ)
Ọzọ MPEI ụlọ ọrụ:
MPEI n'ọbá akwụkwọ, nke akwụkwọ si enweta ego na-agụnye nso 2.000.000 akwụkwọ;
mbikọ mgbagwoju maka 5.000 mmadụ;
polyclinic maka ụmụ akwụkwọ: ụgbọ ihe mberede ojii, dibịa-ọkachamara 'ụlọ, kọmputa diagnostic center, sanatorium-preventorium maka ụmụ akwụkwọ (120 ebe);
Sport mgbagwoju: ámá egwuregwu “Energy”, gymnastic Ụlọ nzukọ Alaeze na, Ụlọ Nzukọ maka ọzụzụ na kpọmkwem ngalaba, tennis n'ụlọikpe, ebe igwu mmiri, isi n'ihi egwuregwu ngwá leasing;
Ụmụ akwụkwọ 'ntụrụndụ bases: Sports-maa ụlọikwuu “Alushta” , Sports-maa ụlọikwuu “Energy”;
dị iche iche bases maka ulo oru omume maka ụmụ akwụkwọ;
Ụmụ akwụkwọ 'imewe Bureau;
Ulo Culture na ọtụtụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na, iche iche ogige maka ngalaba na obere iche iche, maka ụmụ akwụkwọ zuru ike ná mgbede, n'ihi na ememe nke ememme ndị n'ihi na ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ nke MPEI na ndị ọzọ na Moscow mahadum;
ụmụ akwụkwọ 'Cafe, nri emmepe.
Classical etinyere guzobe.
Institute of automatics na kọmputa sayensị.
Institute nke ike irè nsogbu.
Radio engineering na electronics guzobe.
Kwes na ikike atọm engineering guzobe.
Institute of technology, akụnụba na enterprise.
Ọdụdọ engineering guzobe.
Ike ụlọ ọrụ na ulo akwukwo.
Power n'ibu injinịa na-arụzi ụgbọala na ulo akwukwo.
Faculty of ohere ọmụmụ.
Institute of ụlọ ọrụ ọzụzụ “MPEI-FESTO”.
Institute of ụlọ ọrụ nchekwa.
Ị chọrọ atụle Moscow Ike Engineering Institute ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
Moscow Ike Engineering Institute on Map
Moscow Ike Engineering Institute reviews
Jikọọ na-atụle nke Moscow Ike Engineering Institute.
Mbụ Pavlov State Medical University of St. Petersburg Saint Petersburg